Siyaasada Maraykanka Ee Geeska Afrika Iyo Ahmiyada Somaliland Oo Lagu Dhaliilay Xoghaye Pompeo Iyo DanjireYamamoto | #1Araweelo News Network
Siyaasada Maraykanka Ee Geeska Afrika Iyo Ahmiyada Somaliland Oo Lagu Dhaliilay Xoghaye Pompeo Iyo DanjireYamamoto
“Danjire Yamamoto, wuxuuna xittaa ka hortagey inta badan wada hadallada dhanka difaaca ah ee lala yeesho Somaliland,”
“Aqalka Cad ayaa daaha ka qaaday istiraatiijiyaddiisa cusub ee Afrika. Ka dib tobanaan sannadood oo bilow ah oo been abuur ah,”
Washington(ANN)- Siyaasada arrimaha Dibedda Maraykanka ee ku waajahan Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Bariga Afrika, ayaa si weyn loogu dhaliiyay, waxa si cad loo tilmaamay in Maraykanku uu lumiyey tartankii weynaa ee awoodda qaaradda Afrika.
Sidoo kale Danjiraha Maraykanka ee muddada dheer ka shaqaynayay Afrika xiilligana ah safiirka haatan u fadhiya Maraykanka Soomaaliya Donald Yamamoto, kaas oo lagu cannaantay inuu lumiyay, isla markaana ka weecday siyaasada Maraykanka ee gobolka Bariga Afrika.
Danjire Donald Yamamoto, ayaa waajahay dhaleecayn kaga timi sida xittaa uga hortagay inta badan wada hadallada dhanka difaaca ah ee Maraykanku la lahaa jamhuuriyadda Somaliland oo dhawr iyo labaatankii sannadood ee u danbaysay ahayd goob nabadeed oo samaysay doorashooyin, isla markaana hore u ahayd dal Boqortooyadii Britain maxmiyad u ahayd, ka hor intii aannay xoriyadeeda ka qaadan 26 Jun 1960, iyadoo markaa kaddib 1991-kii markii ay burburtay Soomaaliya lasoo noqotay madax-bannaanideedii.
Warxin uu qoray By Michael Rubin oo ah Khabiir aqoonyahan oo ka tirsan Machadka Ganacsiga Maraykanka, isla markaana hore u ahaa sarkaal ka tirsan Pentagon-ka, wuxuu si weyn ugu dhaliilay qoraalkiisa oo lagu shaaciyay maanta Washingtonexaminer, siyaasada Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, wuxuu sheegay in kasta oo Aqalka Cad iyo muxaafid badan ay ka soo horjeedaan gobolka qotoda dheer, dhibaatada ka dhex jirta Wasaaradda Arrimaha Dibedda ay tahay mid runtii ka sii liidata inta badan sida loo oggol yahay.
Tobaneeyo sanno, Waaxda Gobolka ayaa kortay xafiiska (Byzantine bureaucracy) oo ah kooxda dejisa siyaasada iyo Istiraatiijiyada Maraykanka, kaas oo in yar oo ka baxsan waaxda awoodda u leh inay si wax ku ool ah u socdaan, walaw caqligalka ballamaha siyaasadeed uu yahay in dhiig cusub iyo fikir cusub la geliyo xafiisyada dowladda iyo sidoo kale in lagu haggo waaxyaabahaa si ay ula dhacaan fikradaha Aqalka Cad, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa weli ah mid aan laga adkaan karin inta badan.
Xaqiiqadan ayaa ah sababta Xoghayaha Arimaha Dibada Mike Pompeo, iyo xoghayntii hore Rex Tillerson, John Kerry, iyo Hillary Clinton, ay u aaminayeen kaliya lataliye adag. Marka si fudud loo dhigo, sida ugu dhakhsaha badan markay xog-ogaal cusub u soo galaan dhismaha, waxay ka tanaasulaan isbedel, iskaba daa inay si hufan ula shaqeeyaan, Waaxda Arimaha Dibadda ee aan wanaagsanayn iyo dhaqanka u gaarka ah” ayaa lagu yidhi, warbixinta.
Fikrad ahaan, habraacyada ay dejisay Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka waxay awood u siinaysaa siyaasadda dibadda ee Maraykanka inay qaabeeyso munaasabadaha ka dhaca adduunka oo dhan, iyadoo lagu shaandhaynayo go’aamada muhiimka ah, iyada oo loo marayo nidaamka sharciga ah si arrin kasta looga hadli karo heerka ku habboon. Ficil ahaan, wasiir dowlaha, ku xigeenka xoghayaha, iyo shaqada hoose ee ku saabsan arrimaha waa weyn – Shiinaha, Russia, India, Israel, iyo Saudi Arabia waa tiro yar – iyo saraakiisha hoose waxay sameeyaan wixii karaankooda ah ee wax looga qabto arrimaha meel kale, iyagoo og in lagu adkaan lahaa inay helaan jagada xafiiska hore.
“Waxaa jira waxyaabo ka reeban. Markuu xoghayuhu safrayo, kooxaha waddanku si xawli ayay ugu jiraan sida ay ugu halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen talooyinkooda siyaasaddeed ee hadalka ama lagu daro qodobbada hadalka. Marka ay giraangiraha diyaaradda ka baxaan, si kastaba ha noqotee, safaaradda waxay ku noqotaa howlihii caadiga ahaa ee saraakiisha adeegga shisheeye ay ka cabanayeen in aannu jirin qof Washington jooga oo akhriya warbixintooda ama dan ka leh.”
Qaar ka mid ah goobaha shaqada ee gobolka, caadiyan ka baxsan diiradda maalinlaha ah ee Waaxda Gobolka iyo Kongareska, ayaa ku guuleysta iyadoo aan laga helin tixgelin sare. Haddii dibloomaasiyiinta shaqadu ku dhawaad shaqadooda oo dhan ka shaqeeyaan South America, Afrika, Bartamaha Aasiya, ama Koonfur Bari Aasiya, gobolada hela dareenka kaliya ee xafiiska hore, waxay ka xumaadaan ereyada xagga sare aynu ku sheegnay ee ka hor iman kara fikirkooda ama siyaasadaha ay doorbidayaan. Gobolka gudahiisa, saraakiisha adeegda ajnabiga waxay caan ku yihiin, xitaa saaxiibadooda dhexdooda, inay horumariyaan habab hal abuur leh oo cagta lagu jiidayo si looga hortago isbedel kasta oo ku yimaada siyaasadaha ay doorbidayaan.” ayaa lagu sifeeyay siyaasada Maraykanka ee Afrika.
“Sidaas ayay noqotay, ilaa dhowaan, xafiiska Afrika. Bishii Disembar 2018, ka dib bilo wax qabad deg deg ah, Aqalka Cad ayaa daaha ka qaaday istiraatiijiyaddiisa cusub ee Afrika. Ka dib tobanaan sannadood oo bilow ah oo been abuur ah, isla markaana loola dhaqmay Afrika oo kaliya bartilmaameedsiga gargaarka bini’aadminimo ama hawlgallada la-dagaallanka argagixisada, dawladda Maraykanka ayaa ugu dambeyntii xaqiijisay inay hirgelin doonto hannaan guud oo lagu garto aqoonsiga ah, in Maraykanku uu lumiyey tartankii weynaa ee awoodda qaaradda.
Haddii aannay ahayn inta u dhaxaysa xafiiska Afrika, ilaalinta jaangooyooyin shaqsiyadeed waxay u muuqataa inay tahay mid wax u dhimaya danaha qaranka Maraykanka. Shiinaha ayaa hadda ka furtay saldhig ciidamada badda Djibouti meel u jirta hal mayl xerada loo yaqaan “Lem Lemninier”, kaas oo Maraykanku ka fulinayo hawlgallo militari iyo la-dagaallanka argagixisada qaaradda oo dhan. Ciidamada Shiinaha xitaa waxay isku dayeen inay indha indheeyaan duuliyeyaasha Maraykanka oo ay la beegsadaan laseer. Beijing sidoo kale 10 jeer in ka badan ayay ku bixisaa Djibout, marka loo eego Washington waxayna Maraykanka ka bixin kartaa Djibouti, iyadoo faraha sidaa ku qaato Madaxweyne Xi Jinping.
“Tani waa mid ka mid ah sababaha ay Wasaaradda Difaaca Maraykanku u doonayso inay dib ugu soo celiso xidhiidhkii ay la lahayd Somaliland oo deriska la ah Djibouti, waa dowlad aan aqoonsi weli ka helin beesha caalamka, waxayse ahayd dowlad hore oo Ingiriisku ku ilaalin jirtay Gacanka Cadmeed. “
Warbixinta oo ka hadlaysa markii ay Somaliland lasoo noqotay madaxbanaanideeda ayaa tidhi, “Markii Soomaaliya ay ku dhacday qalalaase 1991, Somaliland nabad ayay ahayd. 25-ka sanno ee soo socday, Maraykanku si deggan ayuu ula macaamilay Somaliland, si wax ku ool ah oo hufan ula dhaqmay sida Taiwan iyo Ciraaq Kurdistan.
Hase yeeshee waxa warbixinta si weyn loogu cannaantay Danjiraha muddada dheer ee Afrika ahna safiirka haatan u fadhiya Maraykanka Soomaaliya Donald Yamamoto, kaas warbixinta lagu sheegay inuu ka weecday siyaasada Maraykanka ee gobolka, “wuxuuna xittaa ka hortagey inta badan wada hadallada dhanka difaaca ah ee lala yeesho Somaliland, waligaa ha ka fikirin in suurtagal tahay in Somaliland Dekedeeda iyo garoonkeeda diyaaradaha ee magaalada Berbera oo laga yaabo inay yihiin badelayaasha kale ee gobolka ee Maraykanku ku wareejin karo Djibouti.
Warbixinta, ayaa ka hadashay xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan oo si weyn usoo jiitay indhaha dublamaasiyada ee aduunka, isla markaana noqday waxayaabaha todobaadyadii ugu danbeeyay warbaahinta dunidu , isla markaana ku cannaananay doorka Maraykanka ee xaajinta xidhiidhka cusub ee ahmiyada weyn yeeshay ee Somaliland iyo Taiwan.
“Dhibaatadu maaha keliya hal nin oo u muuqda inuu raadinayo siyaasadiisa iskiis u madaxbannaan. Horraantii bishan, Taiwan waxay aqoonsatay Somaliland, iyadoo oggolaatay inay xafiisyo labada dal midkasta ka dhex sameysato xafiisyo diblomaasiyadeed dalka kale. Go’aanka kama soo bixin buluug laakiin wuxuu u muuqdaa inuu qabsaday Waaxda Arimaha Dibedda Maraykanka, haddii ay ugu wacan tahay Yamamoto iyo shaqaalihiisu inay qaadacayaan in ka badan inta ay la shaqaynayaan saraakiisha iyo Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. Aqalka Cad, si kastaba ha noqotee, waxay aqoonsatay xikmadda ay leedahay iskaashiga Taiwan ee Somaliland, gaar ahaan maadaama ay diiday dhul istiraatiiji ah oo ay ku buuxsanto waxyaabo dhif u ah Shiinaha. Golaha Amniga Qaranka, tusaale ahaan, wuxuu soo dhigay bartiisa twitter-ka: “Waa wax weyn in la arko #Taiwan oo sii xoojinaya ka qeybgalkiisa bariga #Africa waqti baahi weyn leh. #Taiwan waxay Somaliland ku shuraakoobeen si weyn xagga caafimaadka, waxbarashada, kaalmada farsamada, iyo inbadan oo kale! ” ayaa lagu yidhi, warxbinta.
“Waa khiyaano. Sida caadiga ah, kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibedda ee Afrika wuxuu u adeegsan doonaa barta Twitter-ka xafiiska inuu ku soo qoro, wuxuuna ku nuux-nuuxsaday tweet-ka, ama Aqalka Cad ee saameeya Afrika. (Eeg tusaalooyinka halkan, halkan, iyo halkan.) Bog kasta ama qirasho kasta oo Aqalka Cad loogu hambalyeeyo u guuritaanka Taiwan ee Afrika waxay u muuqataa inay tahay mid aan lahayn, wax jawaab celin ahna kama bixin wararka xanta ah ee la xidhiidha laaluushka Shiinaha ee wasiirka arrimaha dibedda ee Gambiya inay ka celiso Gambiya inay raacdo Taiwan,sida ay baarlamaankeedu ku taliyeen.” Ayaa lagu yidhi, warbixinta.
Gebagebadii, warbixinta ayaa usoo jeedisay Siyaasada Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, Waxa u muuqda inuu dhacay waa in diblomaasiyiin xirfad shaqo ay ka hor mariyaan aragtidooda siyaasadeed ee shakhsiga ah oo keliya ma aha midkii hore, laakiin sidoo kale istiraatiijiyad rasmi ah oo Maraykanka ah. Guusha keliya ee xaalada noocaas ah, nasiib daro, waxay noqon doontaa Shiinaha. Sidaa awgeed Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mr. Pompeo, waxaa la joogaa waqtigii la heli lahaa xafiiska Afrika.” Warxin uu qoray By Michael Rubin oo ah Khabiir aqoonyahan oo ka tirsan Machadka Ganacsiga Maraykanka, isla markaana hore u ahaa sarkaal ka tirsan Pentagon-ka.